Isiqokeleli sombane: yintoni na, yintoni na kunye neentlobo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 06/04/2022 12:00 | Uqoqosho lwaseKhaya
Un i-accumulator yombane Sisixhobo esilandela umgaqo ofanayo njengeseli okanye ibhetri. Njengoko igama layo libonisa, yinto ekwaziyo ukuqokelela kunye nokugcina amandla, enokuthi isetyenziswe ixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi emva koko. Kuxhomekeke kwindlela amandla agcinwe kwaye asetyenziswe ngayo. Oku kuthetha ukuba akukho zi-accumulators kuphela, zinokuthi zibe yi-thermal, eya kuba yi-accumulator yokushisa yombane, i-pneumatic, i-hydraulic okanye i-electric okanye i-accumulators yamanzi yomatshini.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba yintoni i-accumulator yombane, zeziphi iimpawu zayo kunye nokuba yintoni na.
2 Iintlobo ze-accumulator yombane
3 Yenzelwe ntoni i-accumulator yombane?
4 Imisebenzi yolondolozo
I-accumulator yombane sisixhobo esisebenza njengeseli okanye ibhetri. Yenzelwe ukugcina kunye nokuqokelela amandla anokuthi asetyenziswe kamva. Ingasetyenziselwa ixesha elininzi okanye elincinci kuxhomekeke kwindlela yokugcina kunye nendlela amandla agciniweyo asetyenziswa ngayo. Gcina ukhumbule ukuba kukho iintlobo ezahlukeneyo zeebhetri, ngoko ke enye okanye enye inokufuneka kwimeko nganye.
Umsebenzi wayo ophambili kukwenza esinye isixhobo sisebenze ngamandla agciniweyo, ngoko ke sinosetyenziso olubanzi kakhulu. Ngokomzekelo, kwiindawo zenkampani, eyona nto ixhaphakileyo kukuba neebhetri ezinkulu ezigcina kwaye zisasaze umbane ngeesekethe ezahlukeneyo.
Uhlobo ngalunye lwe-accumulator yombane lusebenza ngokwahlukileyo ngokuxhomekeke kuhlobo lwamandla apho amandla ombane agciniweyo aya kuguqulwa, kodwa zonke zinento efanayo. Ingongoma kukuba i-accumulator igcina amandla ize iwaguqulele kolunye uhlobo lwamandla okusetyenziswa. Ngokomzekelo, ii-accumulators zokushisa zombane zisetyenziselwa ukubonelela ngokufudumeza kombane kwiipropati ngokusebenzisa ii-radiator zombane.
Iintlobo ze-accumulator yombane
Kukho iintlobo ezininzi ze-accumulator yombane. Makhe sibone ukuba ziyintoni na:
I-accumulator ye-Photovoltaic: Isolar panel iqokelela amandla kwimitha yelanga ize iwagcine kwitanki yokugcina eyenzelwe wona. La mandla angasetyenziswa nangaliphi na ixesha lemini okanye ebusuku ngaphandle kokufikelela kwinethiwekhi yangaphandle ukunika amandla ufakelo lwakho lwentengiso.
Iziqokeleli zobushushu zombane: Zisetyenziselwa ukufudumeza izakhiwo ngeeradiyetha zombane. Ii-accumulators ze-Thermal zisebenzisa umbane ukuvelisa ubushushu, obuthi busasazwe kuwo onke amagumbi. Enye yeenzuzo zayo ezibalaseleyo kukuba ifudumeza ngokukhawuleza kunezinye izixhobo.
Isiqokeleli sombane: Isifudumezi esisebenzisa umbane ukunyusa ubushushu bamanzi etankini. Ngaloo ndlela amanzi ashushu angena kwisiphaluka semibhobho kwaye afikelela kuzo zonke iimpompo zendlu.
Yenzelwe ntoni i-accumulator yombane?
Injongo yeebhetri zokugcina umbane kukwenza esinye isixhobo okanye isixhobo sisebenze ngamandla agciniweyo, nto leyo ethetha ukuba sinemisebenzi emininzi kunye nokusetyenziswa. Iibhetri ezincinci zinokunika amandla izixhobo ezincinci ezifana neeselfowuni. Kodwa ezinkulu ziyakwazi ukuphatha iimoto kunye nezinye izinto ezinkulu.
Ekhaya, ukusetyenziswa kweebhetri nako kwahluka. Kule meko, sithetha ngezixhobo ezinkulu ezenzelwe ukugcina nokusabalalisa umbane ngeesekethe ezahlukeneyo ekhaya.
Ukusebenza kwebhetri kuxhomekeke ikakhulu kuhlobo lwayo. Ngamnye wabo ulandela imigaqo yakhe, ngokusekelwe kuhlobo lwamandla apho amandla ombane aya kuguqulwa khona. Nangona kunjalo, ukongeza kumsebenzi wabo, bonke balandela amanyathelo ambalwa.
Isitshixo kwi-accumulator yombane kukukwazi ngokuchanekileyo ukugcina amandla. Iyayigcina ukuze kamva iguqulelwe kolunye uhlobo lwamandla. Ngaloo ndlela, umbane uguqulelwa ekubeni ube ngamandla ekhemikhali, athi agcinwe de afuneke aze aguqulelwe kumandla ombane ukuze asetyenziswe.
Ukuthatha umzekelo walo msebenzi, sinokusondela kuhlobo oluqhelekileyo lwe-accumulator ekhaya, i-accumulator yokushisa yombane. Ngoko ke, kulula kakhulu ukuqonda indlela ibhetri isebenza ngayo. Kule meko, ii-radiator zombane zihlala zisetyenziselwa ukubonelela ngokufudumeza kombane kwindlu.
Ngoko ke, iradiyetha yombane eqokelela umbane isebenzisa amandla ombane aqokelelweyo ukutshisa iqhekeza leceramic okanye ialuminiyam., yaye ukusuka apho ifikelela kuwo onke amagumbi endlu. Izinto eziphathekayo zinokugcina ukushisa, ngoko ke amandla angasetyenziselwa ixesha elide. Isitshixo sokwazi kanye ukuba yeyiphi ibhetri eyona ilungileyo kwishishini lakho kukuqonda eyona njongo yalo.
Kunqabile ukuba ibhetri iyeke ukusebenza, kodwa ezi zixhobo azikho ngqiqweni. Kwimeko ye-accumulator yombane okanye naluphi na uhlobo lokungaphumeleli, into yokuqala ukukhangela indlela yangaphandle yokuvuza okubonakalayo. Nangona uninzi lweentsilelo kwezi zinto zifumaneka ngaphakathi. Ukongeza kokuvuza kwangaphakathi, kukho ezinye iimpazamo eziqhelekileyo ezifana nezichasi ezaphukileyo okanye iisekethe ezonakeleyo.
Zonke ezi ziphoso zinzulu kangangokuba ekuphela kwendlela yokuyilungisa kukufowunela igcisa elichwepheshile. Ungaze uzame ukusebenzisa amaqhinga ukulungisa ibhetri yasekhaya, njengoko unokuwenza mandundu ngakumbi ingxaki kwaye umphumo unokuba yintlekele.
Ezi zixhobo zinokucetyiswa kuye nabani na. Okona kubaluleke kakhulu, kwabo bafuna ukwandisa ukonga kwabo kwansuku zonke kwamandla. Ngoko ke, ibhetri isetyenziselwa ukongeza izinga localucalulo lweyure. Sebenzisa elona xesha lisezantsi ixabiso lombane ukuze ibhetri ibize oovimba bayo. Ukukhupha amandla agciniweyo emini. Iibhetri zizinto ezineenzuzo ezininzi kufakelo lwasekhaya. Kuxhomekeke kuhlobo olufunayo kunye nento ofuna ukuyizuza ngokuyisebenzisa.
Nabani na, nakweyiphi na indlu, unokuzifaka. Konke oku kuya kusivumela ukuba songe amandla kwaye sinciphise amatyala ombane okanye irhasi ekupheleni kwenyanga ngendlela yethu. Ngokomzekelo, ukuba sinegesi okanye i-oyile yokufudumeza, sinokufaka i-heater yamanzi, okanye i-radiator yombane, sinokusebenzisa umbane ukufudumeza amanzi okanye i-radiator, endaweni yokusebenzisa ibhoyili yegesi, ezi zi-accumulators zikhethwa. Abanye abantu bazigcina ekhaya, kodwa abanye bayayichasa, bakhetha ukusebenzisa iibhoyili zegesi okanye idizili ukufudumeza amanzi kunye neeradiyetha. Yonke into isemthethweni ngokugqibeleleyo.
Nangona kunjalo, ukuba sinesixhobo sokuvelisa amandla elanga kwikhaya lethu, kucetyiswa ukuba ufake iibhetri ze-photovoltaic. Oku iya kusivumela ukuba sigcine amandla njengebhetri, kwaye xa sivelisa i-backup, sinokuyisebenzisa ngaphandle kwelanga, njengasebusuku. Okanye xa sinosetyenziso olunzima kakhulu kwaye singafuni ukuxhomekeka kwinethiwekhi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nokuba yintoni i-accumulator yombane kunye nokuba yintoni na.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » i-accumulator yombane